Hatsikana mandritra ny tontolo andro | Hevitra MPANOHARIANA
Misaotra ra Jentilisa ah! Soa fa misy anareo mba ahafahanay manarka akaiky ny zava-misy eh. Mahereza rahalahy ah
Nampidirin'i The Man @ 09:26, 2010-03-05 [Valio]
Izay tonga eo amin'ny fitondrana dia samy mahay mamorona circus daholo.
Nampidirin'i malagasycool @ 15:25, 2010-03-05 [Valio]
Salama Jentilisa 0
Misaotra anao nitatitra ny ‘ambiance’ tao amin’ity atao hoe teny ifampierana tandrametaka ity.
Izay moa izany sisa ity raharam-pirenena ity. Atsangatsangana eny ny Tanana dia izay no atao hoe safidim-bahoaka. Na dia natao aza ny tsy hiomehy, efa feno loatra ny kapoaka ka na miomehy na mihinjitry ny hatezerana! Ireo mbola mahavita ny moiomehy anefa no toa tena tsy azo fitahana satria mbola tony izany ny fo. Betsaka loatra ny zavatra tsy mampino mitranga. Mahereza hatrany…
Nampidirin'i Mmm @ 18:43, 2010-03-06 [Valio]
[URL=http://rowoxggn.com]krjdopaq[/URL] haoelksz wxljimbh http://pplhnsgn.com brgduuir kyupomnr
Nampidirin'i cpwdxfaz @ 02:50, 2010-03-15 [Valio]
Nampidirin'i Cata @ 19:37, 2011-11-05 [Valio]